Nhau - Mhedzisiro yeGeneham Phytopro pane mammary gland yekudyara mukunonoka kubata pamuviri uye mushure mekusununguka piglets
1. Chinangwa: Kuchengeta mhedzisiro yePX511 yekuwedzera mukutakura kwepamuviri pane kugadzirwa kwekudyara uko kuri kunonoka kubata pamuviri (85 mazuva ekubata - prenatal), mazuva makumi matatu akateedzana kurapwa kwekudya kwakaitwa pane makumi matatu makumi masere padyo nekuparadzanisa.
2. Mhuka yekuongorora:
Inodyara mukunonoka kubata pamuviri: Mwedzi mumwe usati wasununguka (mazuva 85 epamuviri - Parturition).
Kubereka: Landrace & Yakakura chena bhanari yakasanganiswa inodyara mune imwechete batch uye marara
3. Maitiro ekuyedza senge pazasi:
Kudyara mukunonoka kubata pamuviri kwakakamurwa kuva matatu akaenzana mapoka ane gumi Anodyara rimwe nerimwe boka,
Iwo marapirwo ekuyedza aive: Kudzora, PhytoPro 500g, chikafu chebasal + Phytopro 500g / ton kudyisa; Phytopro 1000g, basal chikafu + PhytoPro 1000g / ton kudyisa. Iko kuyedza kwakaitwa kubva pamazuva makumi masere nemashanu ekubata nhumbu
4. Nguva yekuyedza uye saiti: Kubva 3rd Kurume kusvika 2 Kubvumbi, 2020 muChangsha XXX Nguruve purazi
5. Kudyisa manejimendi:Sezvazvinoitika Immune system yepuru Pig purazi. Zvese zvinodyara nead-libitum kuwana mvura asi zvine mashoma chikafu chinodyiwa
6.Cherechedzo yekutarisa: 1. Nguruve dzinoberekwa dzinoreva huremu 2. Hutano vana venguruve vanozvarwa pamarara
Pakutanga kuyedza nhamba
Yapedza kuyedza nhamba
Avhareji yekudya kwemazuva ese
Nguruve dzakazvarwa dzakasiyana
Nguruve dzinoberekwa dzinoreva kurema
Hutano vana venguruve vanozvarwa pamarara
Iyi tafura iri pamusoro inoratidza kuyerwa kuyerwa kwemazuva makumi maviri nemasere yenguruve pakati pekuyedza boka nePhytoPro 1000g / ton kudyisa uye kutonga boka.
7. Kucherechedza pakati peboka rinodzora uye boka rekuyedza nePhytoPro 1000g
Sezvinofungidzirwa, iyo inorema uremu musiyano wenguruve pakati peboka rekutonga neboka rekuyedza nePhytoPro 1000g / ton kudyisa kwaive kungangoita 80g, ukuwo vana venguruve vane hutano vanozvarwa pamarara vakasiyana zvakanyanya. Kufanana kwenguruve kwakagadziridzwa nePhytoPro 1000g / ton yekudya yekuwedzera, zvakare huremu hwemazuva makumi maviri nematatu-enguruve dzakawedzera mutsara uye mutsauko wenguruve waive mudiki. Zvichida imhaka yekuti kudya kwemadzimai kuburikidza neyakagumburwa kunosimudzira kukura kwevana vasina nguruve mudumbu.
Seyakagadzirwa uye kuvandudzwa, Geneham PhytoPro ine hunyanzvi hwekudyara uye kutarisirwa kweveSows munguva yekuzvitakura, inogona kugadzirisa zvinetswa pazasi.
1. Deredza dambudziko rekubvisa nhumbu, kubereka mwana akafa uye kushoma kwekubata pamuviri kunokonzerwa nekushushikana mupfungwa
2. Wedzera lactation vhoriyamu uye simbisa kukura kwemammary gland
3. Dzivisa kuonda kwekudyara panguva yekuyamwisa
4. Wedzera kudya kwekudya
5. Pfupisa nguva yekuendesa
6. Wedzera kukura kwemarara
7.Kunyatso kuvandudza kudyara 'kwekubereka kugona